Apple inoyambira kuti inopenya nhema nhema 7 inogona kutambura micro-abrasions | Ndinobva mac
Ignacio Sala | | apuro, Apple Watch
Dai iwe ukave nemukana wekunakidzwa neshoko rakakura mairi Apple yakaratidza iyo nyowani iPhone 7 mamodheru nezuro, kambani yakanyatso tarisa kune iyo nyowani ruvara: Glossy Nhema, kuva anenge chete protagonist yemazhinji evhidhiyo iyo kambani yakaratidzwa panguva yekuratidzwa. Muvara mutsva uyu unongowanikwa kubva pa128 GB vhezheni, saka kana iwe wanga uchifunga nezve kutenga 32 GB modhi mune iri ruvara, unogona kukanganwa nezvazvo. Asi kana iwe ukasarudzwa, zvisinei nemutengo iwe unofanirwa kuziva kuti kambani inoyambira kuti iyi nyowani inogona kuburitsa zvishoma -mabrasions nekushandisa, saka zvinopfuura zvisingakanganwike kuti tinoshandisa mabutiro, izere-isina mhepo.
Ruzivo urwu runowanikwa mune yekuratidzira ruzivo rweiyo iPhone 7, muchikamu chemavara:
Kupera kweiyo iPhone 7 mukati nhema inopenya mhedzisiro yenyanzvi yekuita anodized uye yakabwinyiswa mumatanho mapfumbamwe. Kumusoro kwayo kwakangoomarara sezvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa neApple, asi inogona kuburitsa mashoma madiki-abrasions nekushandisa. Kana izvi zvichikunetsa, tinokurudzira izvozvo Sarudza imwe yezviitiko zvakawanda zviripo kuchengetedza yako iPhone.
Zvinoita kunge zvisingaite kuti Cupertino-based kambani, yakakumikidzwa kuyedza nevashandisi pese paunoda kuburitsa ruvara nyowani. Izvo zvakatoitika apo Apple yakapa iyo iPhone 5 nenzvimbo grey color, modhi iyo, kana yakatarisana nekurohwa kuri nyore, kana brashe, yakakurumidza kurasikirwa neyemavara. Zvakare kambani inoita kunge inoda kuyedza vashandisi zvakare mushure mekutanga iyi modhi nyowani, iyo kunyangwe iri yakaoma nzira yekugadzira iyo kambani yatonyevera nezvekukuvara kwaingatambura panguva yekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple inoyambira kuti inopenya nhema nhema iPhone 7 inogona kutambura micro-abrasions
Space grey ndeye 5s, 5s iri pachena nhema.
Iyo iPhone shanu yakabuda muchadenga grey uye sirivheri kwete nhema. Ndiwo zvekare wandinazvo.
Vanhu vanoti kushandisa nharembozha ine kesi "hazvina musoro" vanondiratidza kuti vane hanya zvakanyanya nezve chimiro chekuonekwa apuro paunorishandisa, kwete nezve mabhenefiti efoni.